काल बनेर आयो 'कालापत्थर'
कृष्णराज सर्वहारी आइतवार, माघ २८, २०७४ 1384 पटक पढिएको
काठमाडौं : श्रीमान् अनि दुई छोराको पर्वतारोहणका क्रममा मृत्यु भएपछि कुनचाहिँ आमाले भएको एउटा छोरालाई पर्वतारोहणका लागि स्वीकृति दिन्छे र ? तर कान्छो छोरो दावा जिद्दिवाल छ । आमाले नाइँनास्ती गर्दा पनि ऊ हिमाल जाने ढिपि गरिरहन्छ । फर्केर पेम्बासँग बिहे गर्छ । तपाईंलाई खुसी पार्छु आमै भनेर आश्वासन दिन्छ ।
दावाले ‘हामी त हिमालको छोरो । हिमाल नचढेकोमा साथीहरूले गिज्याउँछन्’ भन्दा उसकी आमाले ‘तँलाई हिमालले जन्माएको होइन, तँलाई मैले जन्माएको । तँ हिमालको छोरो होइनस्, तँ मेरो छोरा होस् । हिमाल नचढ्नेहरूले पनि बिहे गरेका छन्, घरबार गरेकै छन् । मलाई पैसा पनि चाहिन्न । तँ नजा हिमाल’ भनेर रोक्छिन् ।
उता दावाकी पे्रमिका पेम्बाले पनि हिमाल नजान रोक्ने अनेक प्रयत्न गर्छे । दावाले ‘अर्कोपटक जान्नँ’ भन्छ । ‘यहीपल्ट मर्‍यो भने ? ’ प्रेमिकाले प्रश्न गर्छे । उसले भन्छ, ‘मरेछ भने चन्द्रमा हेर्नु । त्यही चन्द्रमाबाट म तिमीलाई हेरी बस्नेछु ।’
अन्ततः आमाले दोर्जेको साथ लगाएर छोरा दावालाई मुटुमाथि ढुंगा राखी एक पटकका लागि हिमाल जान अनुमति दिन्छिन् तर छोरा फर्किंदैन । न त उसको लास नै भेटिन्छ । भड्किएको छोराको आत्माले आमालाई दुःख दिइरहन्छ । आमाको सपनामा बारम्बार झुल्किन्छ । त्यसपछि के हुन्छ ?
यसका लागि शुक्रबारदेखि मण्डलामा मञ्चन भइरहेको नाटक ‘काला पत्थरमाथि’ नाटक हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदीपकुमार चौधरीको लेखन निर्देशनमा तयार भएको ‘काला पत्थरमाथि’ नाटकमा प्रायः सबै कलाकारले जीवन्त अभिनय गरेका छन् । दोर्जे (विकास घिसिङ) दावा (सन्तोष तामाङ) लाई बचाउन नसकेर अशुभ समाचार सुनाउन आउँदा दावाकी आमा (निशा पाख्रिन) र प्रेमिका (पत्रिका घिमिरे) भावविह्वल हुँदाको क्षण नाटकको उत्कर्ष हो । लामा (वारात लिम्बू)ले पूजा गरेकोदेखि धामीझाँक्री चढेको सुरुआतको दृश्यमा कृत्रिमता देखिँदैन । यसका अन्य कलाकारमा प्राश्ना डंगोल, पुष्कर कार्की, कृष्ण श्रेष्ठ, विक्रम श्रेष्ठ, बालकृष्ण खत्री रहेका छन् ।
प्रकाश व्यवस्थापन, हिमाल लगायतको साजसज्जा, खोलाको सुसाइ, पाश्र्व धुन, गीतले नाटकलाई उचाइमा पुर्‍याएको छ । दोर्जेले यसपालिको खैरे राम्रो छ, धेरै पैसा दिन्छ भनेर दावालाई फकाइफुल्याई लगेको हुन्छ । समग्रमा नाटकले विदेशीहरूलाई कीर्तिमान कायम राख्न भरियाको काम गर्ने अनेक दुःखी नेपालीहरूको कथा भन्छ ।
यसअघि मसानटार, लवकी कन्या नाटक निर्देशन गरिसकेका उदयपुर घर भएका निर्देशक प्रदीपकुमार चौधरीसँग तराईकेन्द्रित नाटकका थुप्रै प्लट छन् । भन्छन्, ‘जाडोमा हिमालको कथा मञ्चन गर्दा कलाकार पनि मारमा पर्दैनन् । किनकि हिमालको कथाले बाक्लो पहिरनको माग गर्छ ।’ तर, महिला कलाकारहरू बख्खुमा नभई साधारण पहिरनमा देखिएका छन् । पोसाकमा बख्खु नलाएर साधारण पोसाक अलि अमिल्दो लाग्छ ।
तीनकुने पुलमा बम आतंक (फोटोफिचर) 2742
कोलकातामा नेपाल हाउस बन्ने 482
दीपक मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन सुरु 5137
स्टेसनरीमा आगलागी,साढे ४२ लाखको क्षति 112
पाँचथरमा एक हजार च्याब्रुङ प्रदर्शन (फोटोफिचर) 108
खेल उद्घाटन गर्ने क्रममा लडेर मेयरको हात भाँचियो 623
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने रञ्जु दर्शनासहित एक दर्जन पक्राउ 537
प्रदेश-२ का मुख्य न्यायधीवक्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 960
चटपटे बेचेरै गुजारा 259